Sheekada filimka Amar Akbar Anthony: Ravi Teja fariin laga tagay oo aan xiiso laheyn ayuu la yimid! – Filimside.net
Sheekada filimka Amar Akbar Anthony: Ravi Teja fariin laga tagay oo aan xiiso laheyn ayuu la yimid!
November 18, 2018 Zakarie Abdi
Mass Maharaja Ravi Teja waxaa tiyaatarada u saaran filimka Action-ka iyo mada daalada dhameestiran leh Amar Akbar Anthony oo ah mashruuc la wada sugaayay si uu Superstar-kan culeeska dhanak Koonfurta ka heesto isaga dul qaado.
Hogaamiyaasha filimkan: Ravi Teja iyo Ileana D’Cruz
Fariinta Filimk AAA Oo Kooban: Amar (Ravi Teja) iyo Pooja (Ileana D’Cruz) labadooda qoys waa ganacsato shirko ku ah shirkad daawooyinka soo saarto oo gudaha Mareekanka ku taalo.
Laakiin Amar iyo Pooja qoysaskooda waxaa qayaamayaan ganacstado shirkadooda saami yar ku leh kadibna waxay ku geeriyoonayaan qarax baabuur oo qorsho la maleegay ah si shirkada loo gala wareego awood ahaan.
Kadibna filimkan qaybihiisa dambe waxaa loo daawan doonaa sida Amar iyo Pooja uga aar gudan doonaan kuwa waalidiintooda dileen sidoo kalena kala wareegeen hantidii ay lahaayeen.
Bandhiga Jilaayaasha Filimka AAA: Ravi Teja sida caadiga ah kuma caajis galinaayo weliba markaan sedex waji ayuu isku yeelayaa balse fariin waqtigeeda laga soo gudbay iyo doorkiisa oo aan la tayeenin ayaa ka dhigtay in taageerayaashiisa Superstar-kan filimkan ku niyad jabi doonaan.
Ileana mudo lix sano kadib ayay Tollywood kusoo laabatay balse nasiib daro filim fariin adag xambaarsan kuma dhicin waxaana u fiicneyd inay Bollywood-ka baaqi kusii ahaato halkii ay mashruucaan sameyn laheyd!
Sidoo kale jilaayaasha shactireenayaan iyo laadariinta iyagana ma xumo kaalintooda ayay qaateen balse qaabka fariinta filimka AAA loo dhigay ayaa wax walbo nuxurka ka qaaday.
Muxuu Ku Wanaagsan Yahay Filimka AAA:
Muusigadiisa waa dhex dhexaad labo hees ayaa wacan oo la daawan karaa.
Action-kiisa waa dhex dhexaad oo mararka qaar ayuu wanaagsan yahay.
Qaabka loo faaf reebay waa iska dhex dhexaad halka goobaha lagu duubay kusoo yara jiidanayaan.
Muxuu Ku Liitaa Filimka AAA:
Sheeko waqtigeeda laga soo gudbay oo ay ka daaleen Telugu sameynteeda.
Doorarka jilaayaasha oo aan si fiican loo tayeenin.
Shactiro micno aan xambaarsaneyn oo aan xiiso laheyn
Dareenka qiirada badan oo hab adag oo kusoo jiidaneyso loo dhigin.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka AAA:
Amar Akbar Anthony waa mid ka mid ah sheekooyinka ugu liito 2018 Tollywood sameeyaan, wuxuuna filim sameeye Sreenu Vaitla hilmaamay in reer Telugu horey u socdaan dhawaanahana kalsoonida kala laabanayaan aflaanta fariimahooda nuxurka laheyn sidaa darteed AAA waa filim la iska sameeyay oo aan micno badan xambaarsaneyn.
Qiimeynta Sheekada Filimka AAA: 1.5/5 (Hal xidig iyo bar).
Gunaanad: Ravi Teja shacbiyad balaaran wuu leeyahay waana Supertar daawadayaasha mada daalin karo laakiin dhawaanahan waxaa kusoo laab laabanayo doorashada fariimaha aan nuxurka laheyn waa inuu is qabtaa dibna isku soo abaabulaa madaama filimka AAA qasaarada kusii badin doono!
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Amar Akbar Anthony kaasi oo haatan tiyaatarada saaran:
Waxaa Aqrisay 731